Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Oo Go’aan Taariikhi ah Kusoo Af-meeray Khilaafkii U Dhexeeyey Garabyada Xisbiga UCID | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Oo Go’aan Taariikhi ah Kusoo Af-meeray Khilaafkii U Dhexeeyey Garabyada Xisbiga UCID
Hargeysa:(Hubaal)-Maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa go’aan kama dambays ah kasoo saartay khilaafkii ka dhex taagnaa garabyada uu xisbiga UCID u kala fadhiyey, waxana ay soo saartay xukun si weyn looga baaraan degay oo hoggaanka maxkamadda sare uu muddo lafo gurayey. Fadhiga go’aanka lagaga dhawaaqayey oo maalintii shalay lagu qabtay xarunta maxkamadda saree e dalka, ayaa waxa hoggaaminayey guddoomiyaha maxkamadda sare Md Aadan Xaaji Cali Axmed iyo toban garsoore oo maxkamadda sare katirsan, waxana uub guddoomiyuhu halkaas kaga dhawaaqay go’aan ay labada dhinacba si mug leh usoo dhaweeyeen.
Guddoomiye Aadan Xaaji Cali oo fadhiga maxkamadda furay, ayaa sheegay in dedaal iyo maskax badan la geliyey sidii ay maxkamaddu go’aankan usoo saari lahayd, waxana uu xusay inay maxkamad ahaan qaateen sidii ay xalka u arkeen, iyagoo raacaya xeerka dalka, kuwa xisbiga UCID iyo weliba kuwa ay maxkamad ahaan ku shaqeeyaan.
Guddoomiyuhu waxa uu halkaas ka akhriyey go’aamo dhawr ah oo ay maxkamaddu ka gaadhay khilaafkii kala irdheeyey garabyada xisbiga UCID, waxana go’aamadaas nuxurkoodu ahaa inuu xisbiga UCID muddo laba bilood gudahood ah ku qabsado shirweyne aan caadi ahayn oo lagu ansixin doono wixii labadan garab xilligii ay xisbiga UCID ku midoobayeen ku heshiiyeen.
Nuxurka qoddobada lagu soo afjaray khilaafkii xisbiga UCID, ayaa waxa ay u dhignaayeen sidatan:
Maxkamaddu waxa ay soo saartay:
A.Waxa ay qayb ahaan aqbashay asbaabta rafcaanka ee laf-caanlaha iyo qareenadiisaba eek u taariikhaysan 13-08-2016-ka iyo dood-afeedkoodaba. Waxa ay sidoo kale qayb ahaan aqbashay jawaab-celinta asbaabta rafcaanka ee ee rafcaan-sanayaasha iyo dood-afeedkoodaba, waxana ay burisay qoddobka saddexaad ee go’aanka guddida diiwaangelinta axsaabta iyo urrurada siyaasadda, kuna taariikhaysan 21-7-2016-ka.
Waxa ay wax ka-beddeshay qoddobka 1-aad iyo 2-aad ee go’aanka guddida diiwaanglenta ururrada iyo axsaabta qaranka, waxana ay go’aamisay in xisbiga UCID uu qabsado shirweyne aan caadi ahayn muddo lixdan maalmood gudahood ah oo maanta ka bilaabanta sida uu dhigayo qoddobka 25-aad faqradiisa labaad ee xeer/NO 14/2011, si loo horgeeyo heshiiska ay labada dhinac wada galeen.
waxa ay xukuntay in ergada shirweynaha aan caadiga ahayn loo raaco xeerka xisbiga UCID sida uu dhigayo qoddobka 12-aad faqradda labaad ee xeerka xisbiga.
in labada garab ay hawlgeliyaan guddi qaban-qaabo sida uu dhigayo heshiiskoodu oo ku cad qoddobka afraad.
Guddida qaban qaabada shirweynaha aan caadiga ahayn tiradooodu waxa ay noqonaysaa 10-xubnood oo ay si is-le’eg usoo magacaabayaan labada dhinac, waxana marjac u noqoonaya hoggaanka saree e xisbiga ucid oo yeelanaya awoodaha kama dambaysta ah.
Qoddobada go’aanka ah ee ay maxkamadda sare kusoo gebo gebaysay khilaafkii muddada soo taxnaa ee xisbiga UCID dhexdiisa yaallay, ayaa u muuqda qaar aan dhinacna looxu eexanin, iyadoo taasna ay markhaati u tahay inay dhinacyadu si isku mid ah u qaybsan doonaan guddida qaban qaabada shirweynaha aan caadiga ahayn ee la faray inay qabsadaan, isla-markaana ay labada dhinacba si isku mid ah usoo dhaweeyeen.
Dhinacna wax kharash ah looma soo qaadin, waxana xukunkaas galay oo go’aankiisa soo saaray 11-garsoore oo maxkamadda sare katirsan, waana xukun kama dambays ah oo aan wax rafcaan ahi ka bannaanayn, maadaama uu yahay xukun ay maxkamad sare gaadhay.